နောက်ထွက်မယ့်ဖုန်းတွေကို ‘ThinQ’ ဆိုပြီးတော့ LG က နာမည်ပြောင်းမှာလား | Myanmar Mobile App
Home Trending Enterprise နောက်ထွက်မယ့်ဖုန်းတွေကို ‘ThinQ’ ဆိုပြီးတော့ LG က နာမည်ပြောင်းမှာလား
LG G6 နောက်ထွက်ဖုန်းကို LG G7 ThinQ လို့ခေါ်မယ်ဆိုပြီး LG က ကြေညာခဲ့ပါတယ်။ ဘာကြောင့်များ LG G7 လို့မခေါ်တာလဲ။ “ThinQ” ဆိုတာ ဘာများပြောချင်တာလဲ။ “ThinQ” ကို ဘယ်လိုအသံထွက်ရမှာလဲ။ “think” or “thin queue”?
LG က LG V30 ကို နည်းနည်းလေး upgrade လေးလုပ်မယ်လို့ ကြေညာခဲ့ပါတယ်။ ပြီးတော့ LG V30S ThinQ ဆိုပြီးတော့ မိတ်ဆက်မှာပါ။ နားထဲဘယ်လိုကြီးမှန်းမသိဘူး။
ThinQ ကို ဘာလို့များ rebrand လုပ်မယ်လို့ပြောနေတာလဲဆိုတော့ ကနေဒါက LG website လေးမှာ LG G6 လေးကို LG G6 ThinQ လို့ရေးထားတယ်။ အမြင်မှားတာလား။ ဒါမှမဟုတ် ThinQs ကို LG က တဖြည်းဖြည်း rebrand လုပ်ဖို့ စဉ်းစားနေတာလား။
ပုံမှန်အရဆိုရင် နာမည်မှားရေးတာလို့ပြောရမယ်။ ဟုတ်ပါတယ်။ အဲဒီအချိန်တုန်းက ThinQ လို့မိတ်ဆက်ခဲ့တာမှ မဟုတ်တာ။ ဒါပေမယ့် အပေါ်မှာ ThinQ branding လေးလည်း တွေ့ရတယ်။ ဒီတော့ မှားရိုက်တာမဟုတ်တော့ပါဘူး။ rebranding သေချာလုပ်တာပါ။
ကနေဒါ၊ ပြင်သစ် ၀က်ဘ်ဆိုက်တွေမှာ LG G6 ThinQ ဆိုပြီးတော့ ပြသထားပါတယ်။ ဒီတော့ မှားရေးတာဆိုရင် နှစ်ခုလုံးတိုက်ဆိုင်မှုလား။
ဒါက rebrand လား၊ မှားရေးတာလားဆိုတာ မေးမြန်းနေပါတယ်။ ဒီတော့ ပြန်လာခဲ့ပါမယ်။
LG G6 နောကျထှကျဖုနျးကို LG G7 ThinQ လို့ချေါမယျဆိုပွီး LG က ကွညောခဲ့ပါတယျ။ ဘာကွောငျ့မြား LG G7 လို့မချေါတာလဲ။ “ThinQ” ဆိုတာ ဘာမြားပွောခငျြတာလဲ။ “ThinQ” ကို ဘယျလိုအသံထှကျရမှာလဲ။ “think” or “thin queue”?
LG က LG V30 ကို နညျးနညျးလေး upgrade လေးလုပျမယျလို့ ကွညောခဲ့ပါတယျ။ ပွီးတော့ LG V30S ThinQ ဆိုပွီးတော့ မိတျဆကျမှာပါ။ နားထဲဘယျလိုကွီးမှနျးမသိဘူး။
ThinQ ကို ဘာလို့မြား rebrand လုပျမယျလို့ပွောနတောလဲဆိုတော့ ကနဒေါက LG website လေးမှာ LG G6 လေးကို LG G6 ThinQ လို့ရေးထားတယျ။ အမွငျမှားတာလား။ ဒါမှမဟုတျ ThinQs ကို LG က တဖွညျးဖွညျး rebrand လုပျဖို့ စဉျးစားနတောလား။
ပုံမှနျအရဆိုရငျ နာမညျမှားရေးတာလို့ပွောရမယျ။ ဟုတျပါတယျ။ အဲဒီအခြိနျတုနျးက ThinQ လို့မိတျဆကျခဲ့တာမှ မဟုတျတာ။ ဒါပမေယျ့ အပျေါမှာ ThinQ branding လေးလညျး တှရေ့တယျ။ ဒီတော့ မှားရိုကျတာမဟုတျတော့ပါဘူး။ rebranding သခြောလုပျတာပါ။
ကနဒေါ၊ ပွငျသဈ ဝကျဘျဆိုကျတှမှော LG G6 ThinQ ဆိုပွီးတော့ ပွသထားပါတယျ။ ဒီတော့ မှားရေးတာဆိုရငျ နှဈခုလုံးတိုကျဆိုငျမှုလား။
ဒါက rebrand လား၊ မှားရေးတာလားဆိုတာ မေးမွနျးနပေါတယျ။ ဒီတော့ ပွနျလာခဲ့ပါမယျ။
Previous article၈ နှစ်ပြည့် Anniversary Phone ထုတ်မယ့် Xiaomi
Next articleApple က ၂၀၁၈ ခုနှစ် ကွာတား ၁ မှာ HomePod အလုံးရေ ၆ သိန်း ရောင်းချရ